10 months, 1 week ago 1593 Qoodi
Abbaan Alangaa yaada adabbii Mana Murtii Olaanaa Federaalaa ramaddii Lidataa dhaddacha Farra Shororkeessaa fi dhimmoota Heera 2ffaatti dhiyeesseen himatamaan tokkoffaa Artiist Haacaaluu Hundeessaa ajjeesuun balleessaa jedhame Xilaahun Yaamii du'aan akka adabamu gaafate.
Abbaan Alangaa Kamisa, Adoleessa 08, 2013 ALH yaada adabbii ulfaateessitu mana murtichaaf dhiyeesseen, himatamichi kanaan dura hanna Baajaajii fi hadiida Baaburaan himatame akka ture fi sababa weerara vaayirasii Koronaan himannaan sun akka addaan cite kaaseera.
Himatamichi "amala badaa akka qabu ragaa baatootarra dhaga'uu" akka adabbii ulfaateessitu dabalataatti eereera. Haaluma kanaan manni murtichi murtoo adabbii du'aa akka kennu gaafateera.
Himatamaa lammaffaa Kabaddaa Gammachuu ilaalchisee maallaqa ijaarsa manaaf jedhame itti kennameen "meeshaa waraanaa seeraan ala akka bite" haadha himatamicha ragaa ba'u isaani kan yaadachiise Abbaan Alangaa, manni murtiichi himatamaa kana irratti akkaataa qajeelfama murtii adabbiitin akka murteessu gaafateera.
Himatamaa sadaffaa Abdii Alamaayahu ilaalchisee manni murtiichi ofiisaatin haala himannaa isaa ilaalee murtii adabbii akka murteessu gaafateera, Abbaan Alangaa.
Abukaatoota himatamtoota sadaniif mootummaarra ramadaman "amala duraanii himatamtoota kana ilaalame adabbii salphaa akka laatamuuf" jechuun yaada dhiyeessaniiru.
Manni Murtii Olaanaa Federaalaa ramaddii Lidataa dhaddacha Farra Shororkeessaa fi dhimmoota Heera yaada gam lamaan qorate murtii laachuuf Adoleessa 20, 2013 ALH beellameera.
Feb. 25, 2021, 11:37 a.m.